टोड क्यान्टवेल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू टोड क्यान्टवेल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो भनिन्छ "क्यान्टवेल"। हाम्रो टोड क्यान्टवेल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
टोड क्यान्टवेलको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ मध्य मैदानमा एक रोमाञ्चक सम्भावना हुनुहुन्छ। जबकि, केवल केहि थोड टोड क्यान्टवेलको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
टोड क्यान्टवेल बाल्यकाल कहानी - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि:
मिडफिल्डर टोड ओवेन क्यान्टवेल ई February्ल्यान्डको पूर्वी डेरेहाम शहरमा फेब्रुअरी 27 को 1998th दिनमा जन्म भएको थियो। ऊ फुटबल प्रेम गर्ने आमाबाबुको जन्म भएको थियो जसमा स्टीभ नामले चिनिने बुबा र आमाले यो बायो प्रकाशित भए पछि क्यान्टवेलले अनावरण गर्ने निर्णय गर्न सक्दछन्।
टोड क्यान्टवेलको आमा बुबामा जन्म भएको थियो जसको बारेमा थोरै मात्र चिनिन्छ
उसको दृश्य र उच्चारणमा सही, क्यान्टवेल एक ब्रिटिश नागरिक हो र सेतो जातको थोपा ज्ञात जराको छ। उनी आफ्नो भाई जॉर्डन र बहिनी अम्बरको साथ इ England्गल्यान्डको पूर्वी डेरेहम शहरमा रहेको आफ्नो जन्मस्थलमा हुर्केका थिए।
टोड क्यान्टवेल ई raised्गल्यान्डको पूर्वी डेरेहाममा हुर्केका थिए।
डेरेहाममा हुर्केका, क्यान्टवेल गोरा कपाल भएका निलो आँखाहरू भएका बच्चा थिए जसलाई "ट्रेसी बेकर" जस्ता टेलिभिजन कार्यक्रमहरू हेर्न र आफ्ना साथीहरूसँग फुटबल खेल्न मन पराउँथे। उनीसँग धेरै कलिलो उमेरमा प्रोफेशनल फुटबलर बन्ने सपनाहरू थिए र उनले आफ्ना "आर्सेनल फ्यानिंग" आमाबाबुको समर्थन प्राप्त गरे जुन वर्षौंदेखि उनका आकांक्षाहरूको पालनपोषण गर्छन्।
टोड क्यान्टवेल बचपन जीवनी - शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
क्यान्टवेलले आफ्नो प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा इ England्ल्याण्डको डेरेहमको किंग्स पार्क स्कूलमा गरेका थिए। उनको माध्यमिक शिक्षाको लागि डेरेहमको नर्थगेट हाईस्कूलमा पढ्न जानु अघि England
ईस्ट डेरेहम, इ England्ल्यान्डमा किंग्स पार्क स्कूलको विद्यार्थीको रूपमा टोड क्यान्टवेलको फोटो।
दुबै शिक्षा संस्थाहरूमा, क्यान्टवेल विशेष रूपमा नर्थगेट हाईमा सक्रिय फुटबल खेलाडी थिए जहाँ स्कूलको टोलीको सफलतामा उनका योगदानहरूलाई "माथि र पछाडि" वर्णन गरिएको थियो।
चार्ली अस्टिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
टोड क्यान्टवेल बचपन कहानी - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
के यो बायो राइटअप धेरै छिटो चल्दै छ? होईन। हामी फुटबलमा क्यान्टवेलको व्यस्ततामा फर्कदै जाँदा बककल हुनुहोस् किनभने उसले नर्थगेट हाई स्कूल जाने सपना देख्नुभन्दा पहिले नै। के तपाईंलाई थाहा छ क्यान्टवेल डेरेहम टाउन युवा प्रणालीहरूको लागि खेलेका थिए?
हो, उसले पक्कै गरे र आश्चर्यजनक बने जब उनले डेरेहाम टाउन यूथको यू and र यू 8 स्थानका साथ प्रस्तावमा सबै ट्राफीहरू जिते। क्यान्टवेलको चैम्प फारमलाई धन्यवाद छैन, एउटा नयाँ नियम लागू गरियो जसले प्रत्येक खेलाडीलाई एक मात्र ट्रफी जित्न योग्य बनायो। ऊ सन्तुलनको शक्ति थिएन?
टोड क्यान्टवेल धेरै डेराहम टाउन युवा प्रणालीहरूमा उनले जितेका धेरै ट्रफीहरूसँग।
टोड क्यान्टवेल बायो - फेम टु फेम कथा:
डेरेहाम टाउन युवाको सीमित नियम क्यान्टवेलको कब्जा पाउन अघि, त्यतिबेलाका १० वर्षीय व्यक्ति नर्विच एकेडेमीमा बसाइँ सरेका थिए जहाँ उनको अनुमानित उल्का उल्ल rise्घन उथलपुथल भएको थिएन। यद्यपि, क्यान्टवेलले २०१ England मा १ 10 वर्षको उमेरमा इ England्ल्यान्डको यु १ team टीमसँग अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्यका लागि पहिलो कल पाए।
टोड क्यान्टवेललाई १ England वर्षको उमेरमा इ England्ल्यान्डको U17 टीममा बोलाइएको थियो।
२०१ 2017 सम्ममा क्यान्टवेललाई नोर्चिस खेलमा दुई पटकको नाममा नाम दिइयो तर सीनियर टोलीका लागि कहिले देखा पर्न सकेन। उत्सुक मिडफील्डर आफ्नो २० औं जन्मदिन उत्सवबाट केहि हप्ता टाढा थिए जब उसले अन्ततः जनवरी २०१ 20 मा स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा चेल्सी बिरूद्ध एफए कप खेलको दौरान नोर्विच सिटीको पहिलो टीमको लागि असफल सुरुवात गरे। त्यसपछि उनी डच दोस्रो-स्तरीय क्लब फोर्टुनाको लागि edण लिए गए सीजनको बाँकी भागको लागि सिटार्ड।
टोड क्यान्टवेल बायो - प्रख्यात कथामा उठ्नुहोस्:
यो दोस्रो स्तरीय क्लब फोर्टुना सिटार्डमा थियो कि क्यान्टवेलले प्रमाणित गरे कि उनी २०१ twice-१-10 अभियानको अन्त्यमा इरेडभिसीमा सुरक्षित प्रचारको लागि क्लबलाई दुईपटक गोल गरेर तीनवटा सहयोग मात्र १० अवसरमा प्रदान गरे।
टोड क्यान्टवेलले फोर्टुना सिट्टार्डलाई एरेडभिसीमा पदोन्नती गर्न मद्दत गर्‍यो।
नर्विच शहर फर्कदै, कन्टेललाई क्लबको साथ पहिलो सुरुवात अगस्त 2018 मा स्टीभेन्ज बिरुद्ध एक EFL कप खेलको दौरान क्लबसँगै हस्तान्तरण गरियो। उनी 24 / 2018-2 सत्रमा9सबै प्रतियोगिताहरूमा XNUMX प्रदर्शन गर्न गए किनकि नर्विच शहरले स्काई बेट च्याम्पियनशिप शीर्षक जित्यो।
आजको क्यान्टवेलले प्रिमियर लिगमा आफूलाई सबैभन्दा राम्रो मिडफील्डरको रूपमा स्थापित गर्दै छ जुन उनको नवीनतम वीरले २se अगस्ट २०१ 25 मा चेल्सी बिरुद्द गोल गरेका थिए। गोलसँगै, क्यान्टवेल १ number नम्बरको जर्सीमा पहिरिएका थिए - पहिलो नोर्फोल्क बनेका थिए। जन्म १ over बर्षमा नर्विच शहरको लागि प्रिमियर लिग गोल गर्न खेलाडी। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
टोड क्यान्टवेलले अगस्ट २०१ in मा नर्विच शहरको चेल्सीलाई २-२ ले हराउँदा पहिलो प्रिमियर लिग गोल गरे।
टड क्यान्टवेलको प्रेमिका को हो?
गुलाब रातो छ, वायोलेट निलो छ, क्यान्टवेल डेटि could गर्न सक्दछ, तर यसको कुनै चिह्न छोड्दैन। तसर्थ, उनी वर्गीकृत एकल लेबल गर्न सकिदैन, न मिडफिल्डरलाई लेखेको समयमा विवाह गर्न सकिन्छ भनेर चिनिन्छ।
जे होस्, हामी पक्का जान्दछौं कि उनी नर्विच शहरको एघार स्थानमा आफ्नो स्थान ठोस बनाउन केन्द्रित छ, विशेष गरी नयाँ करारमा हस्ताक्षर गरे पछि उनी क्लबमा २०२२ सम्म रहन सक्दछन्। क्यान्टवेलले आफूलाई आफ्नी प्रेमिका वा ब्याग भेट्टाउने धेरै समय नहुन सक्छ। सम्भवतः युनियनबाट छोरा (हरू) र छोरी (हरू) छन्।
रुबेन लफ्फुस-चेक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
टोड क्यान्टवेल सम्भवतः लेखेको समयमा एक्लो छ।
टोड क्यान्टवेल परिवार जीवन:
परिवार क्यान्टवेलको लागि महत्त्वपूर्ण छ र अरू सबै कुरा डिफेन्डरको लागि दोस्रो आउँछ जुन एक अद्भुत पारिवारिक जीवनको आनन्द लिन्छ। हामी तपाईलाई क्यान्टवेल परिवारका सदस्यहरु बारे तथ्यहरु ल्याउँदछौं।
टोड क्यान्टवेलको बुबाको बारेमा:
क्यान्टवेलका बुवालाई स्टीभ क्यान्टवेलको रूपमा पहिचान गरिएको छ। सदा सहयोगी बुबाले यो निश्चित गर्नुभयो कि मिडफिल्डरले नर्विच एकेडेमीको पदभार लिन अघि नै उच्च स्कूल तहसम्मको पारम्परिक शिक्षाको साथ फुटबल संलग्नताहरू मिसाउँदछन्। स्टीव कन्टवेल बनेकोमा गर्व गर्छन र कहिलेकाँहि उनीसँग चैरिटी कार्यक्रमहरूमा पनि जान्छन्।
टोड क्यान्टवेलकी आमाको बारेमा:
कन्टवेलकी आमाको बारेमा थोरै मात्र ज्ञान छ, तर उनले मिडफिल्डरलाई हुर्काउन र उनका खेलहरूमा भाग लिन मद्दत गरे। क्यान्टवेललाई उनको मातृ सहयोगले उसको अन्तर्वार्ताहरूको बखत उनको बारेमा राम्रो सन्दर्भ गर्ने क्षमताको बारेमा झलक बढाउँदै छ। केन्टवेलले सोशल मीडियामा उनीसँगको फोटोहरू राखेर आमा-छोरा गोल गर्ने गति निर्धारण गर्न धेरै समय लागेन।
टोड क्यान्टवेललाई सहयोगी अभिभावकहरूले हुर्काएका थिए जसको बारेमा थोरै मात्र चिनिन्छ।
टोड क्यान्टवेलका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
क्यान्टवेलका दुई भाई / बहिनी छन् जसमा उनका भाइ जोर्डन र बहिनी एम्बर पनि पर्छन्। क्यान्टवेल जस्तै, जोर्डन फुटबल खेल्न मनपराउँछ र परिवारमा तेस्रो फुटबल प्रतिभाको रूपमा आफूलाई वर्णन गर्दछ। यसै बीचमा, क्यानवेल बहिनी अम्बरको बारेमा धेरै थाहा छैन जुन परिवारको एक मात्र छोरी हो भनेर विश्वास गरिन्छ।
टोड क्यान्टवेलका आफन्तहरूको बारेमा:
क्यान्टवेलको विस्तारित परिवारमा सर्दै, उनका एक काका केभिन ओवेन छन्, जो फेकनहमका हुन्, जबकि आफ्ना बुबुआ, भान्जा र भतिजाबारे धेरै जान्दैनन्। थप रूपमा, क्यान्टवेलका बुवा र आमाबुबा हजुरआमाहरू अझै अज्ञात छन् जबकि मिडफिल्डरका काका-भाईहरू आफ्नो जीवनको उल्लेखनीय घटनाहरूमा अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेका छैनन्।
टड क्यान्टवेल व्यक्तिगत जीवन:
क्यान्टवेलको व्यक्तित्वमा मीन राशिफलका विशेषताहरू छन् जसले संवेदनशीलता, रचनात्मकता र स्पट-अन अन्तर्ज्ञान समावेश गर्दछ। उसको गुणहरू सँगै एक राम्रो व्यक्ति प्रदान गर्न जो उसलाई साथीहरू र फ्यानहरूलाई माया गर्दछ।
क्यान्टवेलको व्यक्तित्वको अधिक जटिल पक्षहरूको गहिरो खुदाई गर्दै, उसले आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा विवरणहरू शायद नै प्रकट गर्दछ। यसैले, धेरै धेरै उसका शौकहरू र चलचित्रहरू हेर्न, भिडियो गेमहरू खेल्न, यात्रा र प्रकृतिसँग समय बिताउने बाहेकको रुचिहरूको बारेमा थाहा छैन।
यात्रा भनेको टड क्यान्टवेलको शौक हो।
टोड क्यान्टवेल जीवनशैली:
क्यान्टवेलले कसरी पैसा कमाउँदछ र कसरी खर्च गर्छ भनेर बोल्नुहोस्, उसले एउटा ठोस नेटवर्थ बनाउँदैछ, उसले पहिलो टीम-फुटबल खेल्ने लागि ज्याला पाउँछ। उसको सम्पत्तीमा योगदान पुर्‍याउने अन्य घटकहरूले तिनीहरूको उत्पत्ति अनुमोदन सौदाहरू र निजी लगानीबाट लिन्छन्।
यद्यपि क्यान्टवेल एक रूढीवादी जीवनशैलीमा बाँचिरहेका छन् किनकि उनी वर्षौंदेखि ठूलो आम्दानी हुने आशा गर्दछन्। नतिजाको रूपमा, यसले प्रशंसकहरूले विदेशी कारहरू चलाउँदै र दिग्गज खेलाडीहरू जस्ता महँगो घरहरू स्वामित्व गरेकोमा केही समय लिन सक्दछ। जे होस्, ऊ बिदाको समयमा छुट्टीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रिसोर्टमा भ्रमण गर्न ठूलो छ।
टोड क्यान्टवेल (टाढा बाँया) महँगो रिसोर्टमा छुट्टीको मजा लिदै। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
टोड क्यान्टवेल अनटोल्ड तथ्यहरू:
यस बायोमा उहाँको बारेमा के लेखिएको छ त्यस भन्दा पनि तपाईं टड क्यान्टेललाई कत्ति राम्रो गर्नुहुन्छ? हामी मिडफिल्डरको बारेमा केहि कम ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछौं।
सन्दर्भ: क्यान्टवेल धर्ममा ठुलो छैन किनकि उनी अन्तर्वार्तामा वा धार्मिक लेखनको समयमा लक्षित समारोहहरूमा धार्मिक भएको कुरा कम महत्त्वका साथ दिन्छन्। यद्यपि, अनौंठो कुरा उहाँलाई एक जना मसीहीको पक्षमा छ।
TATOO: लेख्ने समयमा उहाँसँग कुनै शारीरिक कला छैन र रचनात्मक अभिव्यक्तिहरूको लागि बढ्दो पेन्सेन्टलाई विचार गर्दै ट्याटू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यतिन्जेल, क्यान्टवेल उहाँ सिर्जना गरिएको तरिका हो।
टोड क्यान्टवेलसँग अहिले कुनै ट्याटू छैन।
धुम्रपान र पिउने: मिडफिल्डर अवचेतन रूपमा फुटबल ग्रेटहरूको लिगमा खेल्छन् जो लेख्ने समयमा धुम्रपान गर्दैनन् र पिउँदैनन्। यस्तो स्वस्थ मार्गमा हिंड्ने कारणहरू यो सुनिश्चित गर्नु हो कि शीर्ष फ्लाइट फुटबलको मागहरू सम्हाल्न शरीर उत्तम आकारमा रहन्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो टोड क्यान्टवेल बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
नोर्विच सिटी फुटबल डायरी
बेन व्हाइट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
ज्याक ह्यारिसन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
चे एडम्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Conor Coady बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 8
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 9